Geoffrey Rush – Cast – Channel Myanmar
IMDB: 6.6/10 412,709 votes
Pirates of the Caribbean: At World’s End (2007) Captain Barbossa, long believed to be dead, has come back to life and is headed to the edge of the Earth with Will Turner and Elizabeth Swann. But nothing is quite as it seems. File Size : (1.3 GB) and (410 MB) Quality : Blu-Ray 720p Running Time : 2hr 49min Format : Mp4 Genre :Action, Adventure, Fantasy Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Source :1080p.Bluray.DTS.x264-SHiTSoNy Synchronization by ...
IMDB: 7.1/10 518,016 votes
Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest (2006) Captain Jack Sparrow works his way out ofablood debt with the ghostly Davey Jones, he also attempts to avoid eternal damnation. File Size : (1.2 GB) and (480 MB) Quality : Blu-Ray 720p Running Time : 2hr 31min Format : Mp4 Genre :Action, Adventure, Fantasy Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Source :1080p.Bluray.DTS.x264-SHiTSoNy Synchronization by Wai Linn Kyaw Encoded by Thanhtike Zaw
IMDB: 7.3/10 571,751 votes
Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) Jack Sparrow,afreewheeling 17th-century pirate who roams the Caribbean Sea, butts heads witharival pirate bent on pillaging the village of Port Royal. When the governor's daughter is kidnapped, Sparrow decides to help the girl's love save her. But their seafaring mission is hardly simple. File Size : (0.99 GB) and (430 MB) Quality : Blu-Ray 720p Running Time : ...
IMDB: 8.0/10 893,422 votes
Munich (2005) ပါလက်စတိုင်းမြေကို ဂျူးတွေက သူတို့ဘိုးဘွားတွေပိုင်တဲ့ မြေဆိုပြီး ကျူးကျော်ဝင်ရောက် နေထိုင်တယ် ။ ပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေဟာ သူတို့မြေကို ဖယ်ပေးလိုက်ရပြီး ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ လူမသိ သူမသိပဲ ၂၄ နှစ်တိတိ နေလိုက်ရတယ် ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အစ္စရေးတွေကြောင့် ပါလက်စတိုင်းတွေ သွေးမြေကျတာ ဘယ်သူမှ မသိဘူး ။ သူတို့ရင်ထဲမှာတော့ တစ်နေ့တော့ ပါလက်စတိုင်း နိုင်ငံတော်ကြီးပြန်လည်တည်ဆောက်ကြမယ့် အိပ်မက်တွေ ဆုပ်ကိုင်ထားတယ် ။ ကမ္ဘာကြီးပေါ်က အမေ့အလျော့ခံ ပါလက်စတိုင်းတွေဟာ တစ်နေ့တော့ ဂျာမဏီနိုင်ငံမှာ ကျင်းပနေတဲ့ ၁၉၇၂ အိုလံပစ်ပွဲမှာ အစ္စရေး အားကစားသမားတွေကို ပြန်ပေးဆွဲပြီး သတ်ပစ်လိုက်ကြတယ် ။ လူတွေဟာ ပါလက်စတိုင်း ဒုက္ခသည်တွေကို ဂရုစိုက်မိအောင်ပေါ့ ။ အစ္စရေးအစိုးရဟာ ချက်ချင်းပဲ ဂျူးမျိုးချစ်လူငယ် လူလေးယောက်ကို စေလွှတ်ခဲ့တယ် ။ မြူးနစ်အိုလံပစ်အကြမ်းဖက်မှုရဲ့နောက်ကွယ်က လူ ၁၁ ယောက်ကို တိတ်တဆိတ် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ဖို့ပေါ့ ။ ဂျူးနဲ့ ...
IMDB: 7.6/10 187,464 votes
Longing Heart Season 2
She Was Pretty 0
Short flim 1
18+ Uncut BluRay 720P
18+ Uncut Version
DC Blu-Ray 720p